Sidee loo xalliyaa dhibaatada gaadiidka ee Bursa? | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaSidee loo xalliyaa dhibaatada gaadiidka ee Bursa?
01 / 10 / 2012 16 Bursa, DUNIDA, GUUD, Headline, TURKEY
Xafiiska Machadka Farsamada Mechanicals Bursa Shirkadda Isgaadhsiinta Ibrahim March, ayaa maanta ku yiri bayaan, "Dhibaato lama xalin Karin Bursa. Ilaa iyo inta aan ku sameyn karno maskaxda. Arrinta gaadiidka waa arrin ka dhacda baybalkeena oggolaansho sida uu rabo xirfaddayada. gaadiidka Bursa ma aha mid ka mid ah dhibaatooyinka muhiimka ah ee Turkey. 17 million baabuurta ee Turkey, aynu eegno 250 kun oo dadweynaha marka loo eego tirada dadka baabuurta ku dhacaan. Maanta yuhuudda EU-da waa agagaarka 580. Marka aynu eegno tirada baabuurta ee Turkey ee Europe ma aha oo aad u badan. Xitaa dalka Bulgaria, baabuurta 450 waxay ku dhacdaa kun qof. Waxaan xitaa ka danbeynaa Bulgaria oo ku saabsan arrintan. Magaalada Bursa, 2 million 800 kun, tirada gaadiidka ku dhow 600 kun. Celceliska tirada baabuurta ee Bursa, Turkey iyadoo qiyaas ahaan xaaladda isla. Maxay tahay dhibaatooyinka gaadiidka iyo gaadiidka, xitaa haddii aan haysanno gaadiid yar? Waa maxay saldhigga dhibaatada gaadiidka? Waxaan u baahannahay inaan eegno ..
SHARCIYADA QALABKA IN GAADIIDKA
Tilmaan in qorshahaasi uu saldhig u yahay dhibaatada gaadiidka ee Bursa, Mooge Maaris ayaa yiri: "Qorshahayaga mihnadeed ee gaadiidkeenu wuu ka maqan yahay horey. Waqti ka waqti, oo aan la gaarin guul, waxaa jira cillado. Arrin kale ayaa ku saabsan doorashada xulashada gaadiidka. Waxaan samaynay doorasho khalad ah ee gaadiidka. Waxaan doorbidaa gaadiidka shakhsiga ah Dhab ahaantii, sida awood caalami ah ee Turkey sababta oo ah dadaal si loo hubiyo in aannu u helno iyada oo dalkeenna aan doortay inuu gaadiidka wadada. Waxaan maalgashannay maalgashiyada joogtada ah ee wadooyinka waxaanan sababnay dhibaatooyinka soo koraya. "
BURSA'INTA BULSHADA BULSHADA BULSHADA BULSHADA
Ibrahim Mart ayaa hoosta ka xariiqay in gaadiidka xamuulka uu yahay mid muhiim ah, sababtoo ah Bursa waa aag warshadeed oo yiri:
"Si loo xalliyo dhibaatada gaadiidka, waxaan u baahanahay inaan si fiican u baarno. Guud ahaan, gaadiidka dadweynaha ayaa doorbidaya gaadiidka xamuulka ah. Turkey ayaa sidoo kale arrimaha caan ah maalmihii la soo dhaafay, waxaa si tartiib tartiib ah uu bilaabay in uu la fahamsan yahay gaadiidka dadweynaha. Marka aynu eegno noocyada gaadiidka, waddankeena wuxuu leeyahay waddo tareen leh, tareemo, bakhaar iyo dayuurad. Qalabkan 4 waa in loo adeegsadaa hab isku dhafan, ma aha in la dhexgalo, laakin isku xirnaanta. Sidoo kale, arinkani wuxuu ku ool yahay Bursa. Nabadgalyada ugu weyn ee noocyadan gaadiidka ee Bursa waa jidka tareenka. Tareenka ayaa muhiimad weyn u leh gaadiidka caalamiga ah. "
CODSIGA DHIBAATOOYINKA MA JIRO DHIBAATOOYINKA DHALINYARADA
Isagoo ku adkeynaya in dadku ay tahay in la door bido gaadiidka magaalooyinka, ayuu yiri Maayarka Maarso, gaadiid Gaadiidka magaalada Bursa waa in uu ahaadaa mid ammaan ah, la heli karo oo raqiis ah. Xalka dhibaatada gaadiidka, mudnaanta waa inay ahaato bini'aadam, ma ahan siyaasad ama kiro. Waxaan u baahannahay inaan gaadho dadka, ma aha dhexdhexaadiye ama culays. Gaadiidka dadwaynuhu wuxuu u baahan yahay in la taageero. Siyaasiyeyaashu dhab ahaan ma aha geesinimo. Magaalada, kaliya duqa magaalada ayaa isku dayaya in ay furtaan ukunta. Ka hor doorashooyinka, wareegyada cod bixinta sida karti-xirfadeedka ama kartida dadweynaha ayaa istaagaya. Taasina waa sababta qorshaha loo sameynaayo waqti go'an. Maayarku wuxuu rabaa inuu sameeyo inta ugu badan ee suurtagal ah waqtigiisa. Waxa kale oo uu ka walaacsan yahay codbixinta. Dawladaha hoose uma muuqdaan inay xallili karaan dhibaatooyinka sababtoo ah welwelkaas. "
DOLMUŞTAKSI iyo S-PLATES WAXAA LAGA QAADAYAA MAGAALADA MAGAALADA
Maanta, taksiyada, basaska iyo basaska waxaa lagu hadlaa Maarso, Taxi, dolmus iyo basaska ganacsiga ayaa sidoo kale waa kuwa aadanaha laakiin 5 bin 10 kun darawaliin taxi ah ama ganacsiyo yar yar, 2,8 million Bursalılar waa inay ahaadaan. Si kale haddii loo dhigo, waxaa lagama maarmaan ah in la eego inta badan ee xallinta dhibaatooyinka. Taksiyadu waxay si xor ah ugu safri karaan bartamaha magaalada, laakiin basaska, basaska, gawaarida iyo basaska, dugsiga iyo shaqaalaha wata gawaarida adeegga gawaarida waa inayan hubin safarka. Markaa haddii aad ka taxadirto iyaga, dhibaatooyinka ayaa kor u kici doona markaad sii wado in aad dhigto xarunta magaalada ..
WAXYAABO WAXAA ISKU XIRIIRIN
Ibrahim Mart ayaa sheegay in darawalka taksigu uusan ahayn xirfad. "Halkan, darawallada taksiga, dolmuşaksiler, shaqaalaha minibus ayaa eegaya arinkan sida lacagta roodhida. Waa inay xusuustaan ​​in taksiyada aysan ahayn xirfad. Kadib dhankiisa, isagu waa darawal, waana uu sameyn karaa meel kale. Qofkii maalgashaday taksigu wuxuu horey u heley taksiyada intiisa badan, kan kale ee u orda. Qalad kale waxaa weeye in taarikada S ay iibiso degmada. Sababta tani waa, 'Kuwani waxay horey u shaqeyn jireen, aynu helno waxoogaa dakhli'. Tani waa qalad. Gawaarida S-plate waa in la joojiyaa markiiba isla markaana xitaa iibinta waa in la joojiyaa. Waa inaan ka hortagno caqabadaha gaadiidka magaalada. Waxaa jira sharci, laakiin ma raacaysid. Sharciga ayaad soo saartaa, qaybta kale waxay ka faa iidaysataa dabacsanaan, waqtigan ma gelin ciqaabta. Laakiin waxaad gashay dambi. Waxay ubaahantahay in la baxsado.
BARNAAMIJKA BARNAAMIJYADA DEGAANKA BURSA
Tilmaan in gaadiidka khaaska ah in la adkeeyo si loo galo xarumaha magaalada, bisha Maarso ayaa sii socotay;
Belediye Waxaad fiirinaysaa bartamaha magaalada, degmada waa gawaarida. Tani waa qalad. Degmadu waa inay si degdeg ah codsiga uga qaadaan. Goobaha baarkinka waxaa loo baahan yahay in laga saaro, si ku meel gaar ah. Ilaa intaad u ogolaato dhigashada gawaarida magaalada, ma xakameyn kartid gaadiidka bartamaha magaalada. Gaadiidka dadweynaha waa in la ballaadhiyaa. Waa dhab ahaan nidaamka tareenka. Nidaamka tareenka waa goor dambe, waxay u baahan tahay in si degdeg ah loo ballaariyo. "
TAXI AMA MINIBUS MAFIA EE BURSA
Isagoo caddeeyey in gaadiidku uu noqon doono mid raqiis ah, ayuu yiri madaxweyne Marti, "Laakiin waxaan eegaynaa, waxaa jira mafia halis ah magaalada. Waxaa jiran cabsida cabirka, sidaas daraadeed waa gawaarida. Sidaas xitaa galaan kana baxaan qaali, aad u adag. Ma jiri doonto adeeg tagaasid sababtoo ah xaafaddu waa lagama maarmaan si ay u siiso gaadiid gaar ah oo u dhexeeya iyaga. Laakiin ma jirto wax la mid ah dolmstaksi oo ka shaqeeya xariiq. Tani ma aha inay dhacdo. Maafiyada ama maafiyada yar yar waxay ku adag tahay Bursa. Waxay sidoo kale leeyihiin cadaadis xagga siyaasadda. Sidee looga hortagi karaa maafiyada? Dhab ahaantii, tani ma aha oo kaliya in Bursa, dhibaato Turkiga. Taxi, dolmuşaksi ama ganacsiyada minibus waxaa la siiyaa fursado kale si ay u noolaadaan. Waa inay sidoo kale caawiyaan fududaynta gaadiidka ".
In la sheego in mashaariicda kor u qaadaya dhibaatooyinka gaadiidka ee xarumaha magaalada waa in laga fogaadaa, ayuu yiri Maayarka Marti, isagoo markaa bilaabi doona mashaariicdan, qolalka xirfadlayaasha ah, aqoonyahannada iyo jaamacadaha waa in lagu daraa. Xulashada goobta waa mid aad u muhiim ah. Mashruucaagu wuxuu noqon karaa mashruuc weyn, laakiin muddo ka dib waxaa laga yaabaa inuu qarxo. Had iyo jeer waxaan dhahnaa. Dhismaha xarun wax iibsi oo ku taal bartamaha magaalada ma aha mid sax ah. Kordhinta cufnaanta. Kuwani waa waxyaabaha saameeya mustaqbalka magaalada. Waxaad sameysatey xarun wax iibsi ah oo ay ku yaalaan terminal. Kadib markaa waa in kor loo qaado. Ma awoodi doono inuu kiciyo xarunta hadda, laakiin terminalku wuu bixi doonaa. Goobta ayaa ahayd mid aad u ba'an sababtoo ah aan la saadaalin Karin terminal. Garoonka waxaa loo baahan yahay in loo wareejiyo meel ku haboon dhismaha magaalada. "
BURSA WAXAA LAGA HELI KARAA
Duqa magaalada ayaa tilmaamay in Bursa ay noqon karto mid aan la degi karin, wuxuu yiri:
Isbeddelka magaaladu waa mid aad u muhiim ah. Bursa waxaa ku nool dad tiradooda ah 2,8 million, 600 kun gaadhi. Waan ka baqayaa, Bursa waxay noqon kartaa mid aan la degi karin. Sababtan awgeed, waa in aan qorsheyaasheena u dejinnaa annagoo fiirinayna kobaca dadweynaha iyo tixgelinta dhibaatada gaadiidka.
Necati Sahin: Dhibaatada taraafikada ee Bursan waxaa lagu xalliyaa dhiirigelinta gaadiidka dadweynaha
Sidee loo xallin karaa dhibaatada gaadiidka ee Samsun?
Dhibaatada Gaadiidka ee Acemler waxaa lagu xalin karaa 500 Million Investment
Waxay u baahan tahay sabir yar si loo xaliyo dhibaatada gaadiidka ee Bursa
Dhibaatada gawaarida ee Boosaska Bilaashka ah ee loo yaqaan 'Free Zone' waxay u beddeshay qulub
Sidee loo aadaa Isbitaalka Magaalada Bursa?
Dhibaatada Gaadiidka Gaadiidka ee Gaziantep ayaa laga xalin doonaa Tram
Istanbul waxaa lagu xalin doonaa 2016
Rugta injineernimada farsamada
HÜBNER: Shirkadda Hogaanka ah ee Nidaamka Gaadiidka Tareenka (VIDEO)